Omenala Moroccan: okpukpe, ọdịbendị na gastronomy | Akụkọ Njem
Omenala ndị Morocco
Monica sanchez | | Afrika, Ebe njegharị, Morocco
Anyị anụla ọtụtụ ihe gbasara ya Morocco, mba Africa nke dị Spain nso. Mana ha anaghị agwa anyị ihe ọma banyere ya oge niile, kama ọ bụ ihe na-adịghị mma gbasara ndị na-agafe ọdọ mmiri iji chọọ ndụ ka mma na Europe. Ọ bụ ezie na ọ bụ mba a ka na-emepe emepe, nke bụ eziokwu bụ na, dị ka ebe niile, ọ nwekwara ihu "enyi".
Ma obu “ihu” ka m ga ekwu maka ya n’isiokwu a. Ọfọn, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe ị ga-anụ ụtọ ebe a, na obere akụkụ dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke kọntinenti Africa. Mụta maka omenala ndị Morocco.
Morocco bụ mba nwere mmetụta, n'ezie Africa, kamakwa Arabic na Mediterenian. O nwere otutu odinala na omenaala ndi kwesiri ka amara ha ka anyi nwee ike noo ezumike ezumike n’ebe a. Ha bụ ihe ndị a:
1 Oriri tea
2 Okpukpe, islam
3 Amachibidoro mmadụ na ọha, machibidoro ya
4 Nkà nke haggling
5 Oriri nke ihe ọ alcoụ alcoụ na-aba n'anya
6 Ezinụlọ kacha mkpa
7 Ọ bụghị mkparị ịhapụ nri na efere gị
Ọ bụ otu n'ime omenala ndị gbanyesiri mkpọrọgwụ ike. N'ihi na ọ dị oke oke ọkụ, na-ekpo ọkụ n'Africa, ndị Moroko nwere tii mgbe ọ bụla. Nke a bụ ihe ọ drinkụ drinkụ nke ha na ndị ọbịa, ndị ọbịa ma ọ bụ ndị ọbịa ụlọ ahịa na-ekerịta. Ọ bụkwa a ile ọbịa, otu n'ime ọtụtụ 😉. Na Morocco ndị ọbịa ga-anabata ya nke ọma, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-amachaghị ibe ya, mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa ha ka ha rie.
Na Morocco okpukpe kachasị mkpa bụ Islam. Ha na-efe chi, Allah, na-efe ya kwa ụbọchị. N'ezie ha na-ekpe ekpere Oge 5 kwalitere ruo ugbu a:
Ụtụtụ: edem usiahautịn mbemiso edem usiahautịn.
Asr: n'etiti ehihie tupu anyanwụ ada.
Magriba: ịghọ abalị.
E nwere ọtụtụ ụlọ alakụba gbasasịrị na mpaghara ahụ niile, dịka Alakụba Agadir, nke kachasị ibu. O nwere ulo elu di elu, ufodu mara nma nke oma na uzo uzo di iche na mgbidi ... ma o di nwute, amachibidoro "ndi ekweghi ekwe" ntinye. Ọ bụrụ na ị bụghị Muslim ị nwere ike ịbanye na ụlọ alakụba Hassan nke Abụọ na Casablanca, nke bụ nke atọ kasị ukwuu n’ụwa. Ọ na-wuru na-egbu maramara mabul, na nwere n'ezie dị mma nke ukwuu mosaics. Minaret ahụ karịrị mita 200 n'ịdị elu, si otú ahụ ghọọ onye kachasị elu n'ụwa.
Amachibidoro mmadụ na ọha, machibidoro ya
Ndị ọdịda anyanwụ na-amakụ onwe ha mgbe ha na-enye anyị ozi ọma, ọbụlagodi n’etiti okporo ámá. Amachibidoro nke a na Morocco. Naanị ụmụ nwoke nwere ike ịga aka na aka. Maka ha, ọ bụụrụ ha ihe akara enyi. Anabataghịkwa igosipụta ọhaneze ịhụnanya n’ebe nwoke na nwanyị Alakụba nọ.
Nkà nke haggling
You nwere ike iche n’ịga ahịa n’ụlọ ahịa ọ bụla n’okporo ámá gị ma malite ịgba mgba? O yikarịrị ka ọ gaghị adabara onye na-ere ya ma ọlị, mana na Morocco ọ dị iche: ọ bụrụ na onye ahịa ahụ anaghị azụ ahịa, mgbe ahụ onye na-ere ere nwere ike iwere ya dị ka mmejọ. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe nkịtị na ngwaahịa enweghị ọnụahịa akara, nke mere na ndị mmadụ na-amalite haggle.
Na omenala Arab ọ bụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze; n'eziokwu, anaghị ahụ ya nke ọma na a na-anabata ọnụ ahịa onye ahụ ozugbo ozugbo, ruo n'ókè nke na onye na-ere nwere ike iwe iwe. Ihe a na-emebu bụ gwaa ego dị ala karịa ma site na isi ahụ kwenye na ọnụahịa kwesịrị ekwesị na-aba uru ma ndị ọzọ.
Oriri nke ihe ọ alcoụ alcoụ na-aba n'anya
N'ebe nri ụfọdụ na mba a na-anabata mmanya na-aba n'anya ma na-enye mmanya na-aba n'anya. Agbanyeghị, ọ bụghị usoro izugbe na onye ọbịa ga-aghọta akụkụ a. Agaghị akwụ ụgwọ ụlọ oriri na ọ toụ andụ mmanya na ọ dị njọ nke ukwuu ịumeụ ya n'okporo ụzọ ọha ma ọ bụ jiri mmanya ole na ole jiri ụkwụ gafee n'okporo ámá. Nkwanye ugwu dị oke mkpa iji nwee ọ yourụ na ọnụnọ gị na Morocco.
Ezinụlọ kacha mkpa
Ọ bụrụ na e nwere ihe gafere site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ọ bụ ya womenmụ nwanyị aghaghi ịlụ di na nwunye. Ya mere, amachibidoro inwe mmekọrịta tupu alụmdi na nwunye. Alụmdi na nwunye bụ iwu, di na nwunye niile ga-alụkwa ma ọ bụrụ na ha achọghị ka ọha mmadụ na-ele ha anya ọjọọ.
Ọzọkwa, ezinụlọ bụ Sagrada maka ndị Moroccan, ọ bụ ndị agadi, na ọkachasị ndị okenye, nwere okwu ikpeazu mgbe emere mkpebi ndị dị mkpa.
Ọ bụghị mkparị ịhapụ nri na efere gị
Enwere nri n'ụba, yabụ ọ bụrụ na ahapụ nri na efere, ọ nweghị ihe na-eme. Ọ bụ ihe na-eme ọtụtụ oge n’obodo a. Ma n'ụzọ, ị kwesịrị ịmara na ọ bụrụ na ị jiri aka ekpe gị rie nri, ọ nweghị ezigbo uto, ebe ha na-ewere ya dị ka omume na-adịghị ọcha, n’ihi na n’ọdịnala, ha na-eji aka ahụ ehicha akụkụ ahụ ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​gaghị echegbu onwe gị, ebe ọ bụ na ị ga-ezere iji ya ma ọ bụrụ na ị rie nri na-enweghị cutlery.
You maara nke ọ bụla n'ime omenala ndị Morocco a? You maara ndị ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Morocco » Omenala ndị Morocco
ọ bụ mba na-atọ ụtọ !! Ọ ga-amasị m ị ga-aga ụbọchị ụfọdụ ...
Echere m na ọdịbendị nke Morocco mara mma nke ukwuu
Morocco bụ nrọ, ileta ya emeela m ya ugboro atọ, ndị na-enyere aka dị iche iche, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ picaresque, ọ dịkwa oke ọnụ, mana to .na -ebi ndụ ma ọ bụ kwuo, ha ka dịkwa otu ha enwebeghị ike. n'agbanyeghị ihe niile ... M hụrụ Morocco n'anya.
gba ọtọ dijo
Ahụrụ m ya n'anya, ọ bụ mba jupụtara na omenala ma ọ masịrị m
Zaghachi khaoula khaoula
Peeji a nyeere m aka nke ukwuu n'ihi na nna m maara omenala nke Morocco
Ana m agba onye ọ bụla ume ikwu okwu na Morocco na ndị ya, gaa ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị ebe ahụ. Alụrụ m onye Moroccan ma anyị nwere ọmarịcha nwa agbọghọ, a na m eme njem na Morocco maka afọ 7 yana m na ezinụlọ m nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị zuru oke, ha dị ebube. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nkwanye ùgwù, ka anyị kwanyekwa onwe anyị ugwu. Ihe banyere ndị nwunye 4 bụ ụgha…. dị ka ọtụtụ arụrụala ndị m gụrụ ma nụ. Atụkwasịla obi n'ihe niile ị nụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị hụrụ, amabeghị m nwoke ọ bụla nwere ụmụ nwanyị anọ, enwekwara m ọtụtụ ezinụlọ ebe ahụ n'ihi di m….
Lilliam de Jesus Sanchez dijo
Ndewo Maria, m na-ezute Morocco na m ga-achọ ịmatakwu banyere omenala ha, daalụ
Zaghachi Lilliam de Jesús Sánchez
Ntughari Anya ma ọ bụ VMC (Ọnọdụ ihu igwe ihu igwe)
Mirissa, ebe whale dị na Sri Lanka